Archives Studies Vietnam - ny Tany Masin'i Vietnam Studies
LOHATENY VIETNAMESE LOHAHEVITRA dia ahitana lahatsoratra mampiditra ny fiteny Vietnamianina.
Ny abidia Vietnamese, izay fantatra ara-bakiteny hoe "script nasionaly", dia ny rafi-panoratra maoderina ho an'ny fiteny Vietnam.
Vietnamianina dia fiteny tonal, midika izany fa ny fihenan'ny feo isan-karazany amin'ny teny rehetra dia hanova ny dikan'io teny io.
Hits: 706… notohizan'ny fizarana 4: Dialogue: FIOMPIANA David dia mpianatra vao avy nanatrika kilasy Vietnamianina iray,
Voatanisa etsy ambany ao amin'ny orthograma Vietnamese ny consonan izay mitranga amin'ny Vietnamianina izay misy ny fanononana phonetic amin'ny havanana.
Misy taratasy 29 ao amin'ny rafi-abidia Vietnamianina izay misy fehezanteny 12 sy konsons 17.
Ny fiteny Vietnamianina no tenim-pifandraisana tenin'ny olona Vietnamianina ary koa ny tenin-tenin'ny olona Vietn.
Ny famolavolana marika diakritikika, ary ny fampidirana azy miaraka amin'ny alalàn'ny taratasy, dia zava-dehibe amin'ny fampahafantarana ny Vietnamese mazava sy azo tanterahina.
Amin'ny fanoratana, ny Vietnamianina dia miankina betsaka amin'ny marika diakritika.
Araka ny hita amin'ny abidia, ny rafi-panoratana Vietnam dia mampiasa litera fanovana fito.
Fitsidihana anio: 316
Andro farany 7 nitsidika: 2,291
Total visits: 420,542